Posted by zizawa ⋅ 17/05/2010	⋅ 13 Comments
ဝန်ခံရရင် ကမ္မဖလ ကို ဖတ်ရတာဟာ Stars look down ကို ဖတ်ရတာထက် အားရကျေနပ်ဖြစ်မိတယ်လို့ ပြောလို့မရဘူး။ ကမ္မဖလ မှာ စာရေးသူက ဝင်ပါထားတာကို သိသိသာသာ မြင်နေရပြီး၊ Stars မှာက စာရေးသူကို လုံးဝမှ မမြင်မိအောင် ဖြစ်ရတယ်။
“နွားခြေရာနောက်ကို လိုက်တဲ့ လှည်းဘီးပမာ” ဆိုတာဟာ တစ်ဘဝထဲ ဖြတ်တွေးဆုံးဖြတ်လိုက်လို့ မရဘူး လို့ ခံယူတဲ့ စိတ်နဲ့ ဖတ်တော့… Cronin ရဲ့ စာအုပ်ကမှ တကယ့် လောကကို ထင်ဟပ်နိုင်တယ် လို့ ဘဝင်ကျမိတယ်။ အဲဒီတော့ (တရားမှုဟာ ကိုယ့်ဘက်မှာ လောလောဆယ် ရှိချင်မှ ရှိမယ်၊ ဘယ်တော့မှ မရှိဘဲ နေသွားတာလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒိအတွက် ကိုယ်ဟာ တရားမှုပေါ်မှာ ကောင်းမှုပေါ်မှာ သစ္စာမဖောက်သင့်ဘူး။) ဆိုတဲ့ အဆိုကိုပါ အင်မတန် ဘဝင်ကျစွာ လက်ခံပါတယ်။
Posted by RITA | 18/05/2010, 03:18 Reply to this comment	တရားတဲ့အတိုင်း ဖြစ်စေချင်တာ၊ မတရားမှုက တရားမှုကို အနိုင်မရစေလိုတာဟာ လူရဲ့မွေးရာပါ ဆန္ဒဖြစ်ပုံရတယ်။ ပြောခဲ့တဲ့ တရားကို နတ်စောင့်တယ်ဆိုတဲ့ စကားမှာ ဒါကို
Posted by zizawa | 18/05/2010, 05:30 Reply to this comment	ဘာသာတရားက လူကို ပြုပြင်ခဲ့သလား၊ လူက ဘာသာတရားကို ပြုပြင်ခဲ့သလား ဆိုတာပါ စဉ်းစားမိသွားပြီ။
Posted by RITA | 18/05/2010, 06:14 Reply to this comment	ဘာသာတရားက လူကို ပြုပြင်ခဲ့တာပါ။ For me, Buddha show the universal truth and all my idea are base on this universal truth.
Posted by zody | 17/06/2010, 03:51 Reply to this comment	(No, ကံနှင့်ကံ၏အကျိုးကြောင့် ပြုသမျှ ပြုသူ၏ စေတနာ အရှိန်အရ အကျိုးပြန်ရပါသည်။)
Posted by zizawa | 17/06/2010, 06:56 နောက်တခါ ဘာသာတရားက လူကို ပြုပြင်ခဲ့တယ်ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ လူနဲ့ ဘာသာတရား ဘယ်သူက အရင်စဖြစ်သလဲ။ ဘာသာတရားက လူတွေရဲ့ စိတ်ဓာတ်၊ အမူအကျင့်ပေါ် သြဇာသက်ရောက်မှုရှိနိုင်တာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါကလည်း လူကိုယ်တိုင်က ဒီဘာသာတရားကို တနည်းတဖုံ လက်ခံနိုင်စွမ်းရှိလို့ သြဇာ သက်ရောက်နိုင်တာ မဟုတ်ဖူးလား။ မုန့်ဟင်းငါးကြိုက်တယ်ဆိုတာ မုန့်ဟင်းငါးကိုယ်က ကောင်းလွန်းလို့လား လူတွေကို ကြိုက်သွားစေတာလား၊ ဒါမှမဟုတ် စားတဲ့လူရဲ့ လျှာက မုန့်ဟင်းငါး အရသာကို ကြိုက်နိုင်စွမ်း ရှိလို့ ကြိုက်သွားတာလား။
Posted by zizawa | 17/06/2010, 07:02 လူနဲ့ ဘာသာတရား ဘယ်သူက အရင်စဖြစ်သလဲ ဆိုရင် တော့ လူ က စ ဖြစ်တာပါ။ ကျွန်တော်လိုသွားတယ်။ ဘာသာတရား ကို အဓိပ္ပယ်သတ်မှတ်ဖို့လိုသွားတယ်။ ကျွန်တော် ဆိုလိုချင်တဲ့ ဘာသာတရား ဆိုတာက ဘုရားဟောကြား ခဲ့တဲ့ သစ္စာလေးပါး။ အနိစ္စ၊ဒုက္ခ၊အနတ္တ။ စတဲ့ universal truth တွေကို ဆိုလိုချင်တာပါ။ ဒီ သစ္စာလေးပါး။ အနိစ္စ၊ဒုက္ခ၊အနတ္တ။ ဆိုတဲ့ တရား (တနည်းအားဖြင့် ဓမ္မ၊ တနည်းအားဖြင့် လောကသဘော) တွေဟာ ဗုဒ္ဓ မရှိလည်း ရှိတယ်၊ ဗုဒ္ဓ မသိရင်တော့ သာမန် လူတွေ မသိနိုင်ပါဘူး။ ဗုဒ္ဓက ဒီတရားတွေကို လူတွေ(အမျိုးမျိုးသော လူတွေ) နားလည် သဘောပေါက် ကျင့်ကျြံနိုင်အောင် ဥပမာ အဖုံဖုံ ၊ နည်းအဖုံဖုံ နဲ့ပြသလမ်းညွှန် ပေးခဲ့တဲ့ စကား တွေကိုအားလုံးစုပေါင်း ပြီးတော့ အလွယ်အားဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ လို့ခေါ်ဝေါ်ကြတာပါ။So, if we trace back , I want to say that ဘာသာတရားက လူကို ပြုပြင်ခဲ့တာပါ။
Posted by zody | 17/06/2010, 09:47 ဒါပေမယ့် ဘာသာတရားတွေက ကောင်းတယ်ဆိုအုံးတော့ လူတွေကိုယ်နှိုက်က ကောင်းတာကို လက်ခံနိုင်စွမ်းရှိမှ လက်ခံနိုင်မှာပေါ့။ အပြုပြင်ခံမှာပေါ့။ ကျွဲပါးစောင်းတီးတွေနဲ့ ပြည့်နေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတခုမှာ ဘယ်လောက်ကောင်းတဲ့ အယူအဆပဲ ဖြစ်ဖြစ် တိုးပေါက်ဖို့ ဘယ်လွယ်မလဲ။ zody ပြောသလို ဘာသာတရားက လူကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲတယ်ဆိုရင် ဘာသာအယူပြောင်းတာတွေကိုရော ဘယ်လို ရှင်းပြမလဲ။ ခရစ်ယာန်ကနေ ဗုဒ္ဓဘာသာ ပြောင်းလာတဲ့လူကို ဗုဒ္ဓဘာသာဘက်က အမြင်မှန်ရလို့၊ ဗုဒ္ဓအဆုံးအမက သူ့ကို သွန်သင်လိုက်လို့လို့ ပြောမှာပေါ့။ တဘက်က ခရစ်ယာန်ဘက်ကကြည့်ရင်တော့ တမျိုးဖြစ်မှာပေါ့။ ဘယ်ဘက်က မှန်သလဲဆိုတာ ဘယ်လိုလုပ်သိနိုင်မလဲ။
Posted by zizawa | 17/06/2010, 09:58 ဇီဇ၀ါမှားနေတာလေး တစ်ခုလောက်တော့ ထောက်ပြချင်ပါတယ်။ မကောင်းမှုလုပ်လို့ မကောင်းမှုပြန်ခံစားရမယ်ဆိုတာ လူ့သဘာဝမဟုတ်ပါဘူး။ လောကနိယာမ သဘောတရားပါ။ ဖန်ဆင်းရှင်ဆိုတဲ့ ကရုဏာရှင်တောင် သူ့စကားနားမထောင်တဲ့သူနဲ့ နားထောင်တဲ့သူကို တရားစီရင်ပြီးမှ နိုင်ငံတော်မှာ နေထိုင်ခွင့် ပေးမယ်လို့ ကျမ်းစာ အများအပြားက ဆိုထားကတည်းက ဖန်ဆင်းရှင်တောင် အမှန်တရားကို လိုလားတယ်လို့ ပြောလို့ရသလို သူ့စကားနားမထောင်တဲ့သူနဲ့ နားထောင်တဲ့သူခွဲခြားမယ်ဆိုတဲ့ ဖန်ဆင်းရှင်ရဲ့ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်မှုကိုလည်း ပေါ်လွင်စေပါတယ်။ အဲ့ဒိမှာ ရှင်းရှင်းလေးပါပဲ တရားမျှတမှု မရှိဘူးဆိုတာ ပေါ်လွင်ပါတယ်။ ကောင်းတာလုပ်ရင် ကောင်းတာဖြစ်မယ် မကောင်းတာလုပ်ရင် မကောင်းတာဖြစ်မယ်ဆိုတာ လူတိုင်း၊ ဘာသာတရားတိုင်းလိုလို လက်ခံပါတယ်။ ဖြစ်ချိန်တန်ရင် ဖြစ်မယ် ဖြစ်ချိန်မတန်ရင် မဖြစ်ဘူး၊ ဖန်ဆင်းရှင် ကိုးကွယ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ ဘာသာတရားတွေမှာတောင် ဖန်ဆင်းရှင် အလိုတော်ရှိမှ ဖြစ်တာလေ။ အဲ့တော့ ဘယ်နေ့မှာ ပြန်ဖြစ်မလဲဆိုတာ မသိနိုင်ဘူးပေါ့။ သေခြာတာကတော့ ကောင်းတာလုပ်ရင် စိတ်အေးမယ်၊ မကောင်းတာလုပ်ရင် ကိုယ်ဟာကို ပြန်တွေးတိုင်းမှာ စိုးရိမ်ပြီးပူလောင်နေရတယ်ဆိုတဲ့အတွက် ဘယ်လမ်းကို ရွှေးမလဲဆိုတာ ရွေးချယ်တဲ့သူအပေါ်မှာပဲ မူတည်ပါတယ်။။
Posted by မိုက်မိုက် | 19/05/2010, 09:51 Reply to this comment	@ မိုက်မိုက်
Posted by RITA | 20/05/2010, 00:57 Reply to this comment	လောကကြီးဟာ တရားတဲ့အတိုင်း ဖြစ်ရမယ်လို့ ဘယ်သူမှ အာမမခံနိုင်ဘူး။ လူများစုက တရားတဲ့ အတိုင်း ဖြစ်စေချင်ကြပေမယ့် ဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်မှာ။ (ထောက်ခံပါတယ် ထောက်ခံပါတယ် ထောက်ခံပါတယ်)။ မတရားလုပ်တဲ့သူဟာ တနေ့နေ့ မှာ မတရားတဲ့ အကျိုးကို ပြန်ခံစားရချင်မှ ခံစားရမှာ။ မကောင်းမှုက သူ့ ကိုပြန်ဒုက္ခပေး ချင်လည်း ပေးမယ်၊ မပေးချင်လည်း မပေးဘူး၊ အာမမခံနိုင်ဘူး။ (No, ကံနှင့်ကံ၏အကျိုးကြောင့် ပြုသမျှ ပြုသူ၏ စေတနာ အရှိန်အရ အကျိုးပြန်ရပါသည်။) ဒါပေမယ့် မကောင်းမှုကို မလုပ်သင့်ဘူးဆိုရာမှာ ပြောခဲ့တဲ့ မကောင်းမှုရဲ့ နောင်တနေ့ ဆိုးကျိုးပြန်ပေးလာနိုင်တယ် ဆိုတဲ့ အချက်ကို လုံးဝထည့်မစဉ်းစားသင့်ဘူးလို့ ကျနော်ထင်တယ်။ (ကံနှင့်ကံ၏အကျိုးသည် ဗုဓ္ဒဝါဒ ဖြစ်သောကြောင့် အခြားနည်းဖြင့် ဆွေးနွေး စေခြင်သည်ဟုနားလည်ပါသည်။)နောင်တနေ့ နေ့ဆိုးကျိုးပြန်မပေးရင်တောင် မကောင်းမှု မတရားမှုကို မလုပ်သင့်ဘူးလို့ ထင်တယ်။ (ထောက်ခံပါတယ် ထောက်ခံပါတယ် ထောက်ခံပါတယ်)
Posted by zody | 17/06/2010, 03:45 Reply to this comment	မကောင်းမှုကို ဘာကြောင့်မလုပ်သင့်ဘူးဆိုတာ စဉ်းစားကြည့်ရင် ပထမဆုံး တွေးမိတာက ကောင်းမှုကို ဘာကြောင့် လုပ်သင့်သလဲဆိုတာ စဉ်းစားမိတယ်။ ကောင်းမှုဘာကြောင့်လုပ်သင့်သလဲသိရင် မကောင်းမှုကို ဘာကြောင့် မလုပ်သင့်ဘူးဆိုတာ ရှင်းမယ်ထင်တယ်။
ကျွန်တော်တို့ ကောင်းမှုကို ဘာကြောင့်လုပ်သင့်သလဲ။ အရင်ဆုံး ကောင်းမှုဆိုတာကို ဘယ်လို သတ်မှတ်မလဲ။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ကတော့ ‘အကျိုး’ နဲ့တိုင်းပါတယ်။ Utilitarianism ခေါ်မလား။ အများစုရဲ့ အကျိုးကို လုပ်ခြင်းကို ကောင်းမှုလို့ ခေါ်မယ်။ ဒါဆို ဘာလို့ အများအကျိုးကိုလုပ်သင့်တာလဲ။ အများအကျိုးလုပ်ခြင်းဖြင့် society မှာ ကိုယ့်အတွက် အကျိုးတစ်ခုဖြစ်လာစေမယ်။ (အနည်းဆုံးတော့ reputation ရစေမယ်။ လူ့သဘာဝအရ သူတို့အပေါ်ကောင်းတာလုပ်တဲ့သူကို လူကောင်းလို့ သတ်မှတ်ပြီး တခြားလူတွေထက်ပို အခွင့်အရေးပေးတာကို တွေ့ရတယ်) ဒီတော့ society ကို ကောင်းတာလုပ်ရင် ကိုယ့်အတွက် အကျိုးရှိနိုင်မယ်။ (တကယ်တော့ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တာပေါ့ဗျာ။ NGO တွေလုပ်စားသလိုပေါ့။ ကောင်းတာလုပ်လို့ အရှုံးမရှိပါဘူး။😉 ဒီတော့ကာ ကောင်းမှုနဲ့ မကောင်းမှုယှဉ်လိုက်ရင် ကောင်းမှုက အလေးသာနေပြီ။
ဥပမာ အရင်းရှင်စနစ်ဟာ မတရားဘူး။ ဒါပေမယ့် လူအများစုအတွက် အကျိုးရှိမယ်ဆိုရင်တော့ ဒါဟာ လုပ်သင့်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုလို့ သတ်မှတ်နိုင်မယ်ထင်တယ်။ ဒါကြောင့် မတရားမှုတစ်ချို့ဟာ “ကောင်း” နေမယ်ဆိုရင် လုပ်သင့်တယ်လို့ ပြောလို့ ရနိုင်မယ်ထင်ပါကြောင်း..။😀
Posted by Arkar Kyaw | 12/11/2011, 17:14 Reply to this comment	interesting thoughts. try searching euthypro dilemma on google or standford on-line philosophy. wish i could talk more. hopefully you’ll find something useful from your search.
Posted by zizawa | 13/11/2011, 19:30 Reply to this comment	LeaveaReply Cancel reply	Enter your comment here...